Madaxda maamul goboleedyadda dalka oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxda maamul goboleedyadda dalka oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya soo gaaray madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka, kuwaas oo lagu wado inay ka qeyb galaan shir madaxda madasha wada-tashiga qaran oo maalinta berrito ah ka furmi doono Muqdisho.
Mas’uuliyiinta maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabeey oo wakiil ka ah madaxweynaha maamulkaas C/kariin Xuseen Guuleed oo arrimo caafimaad ugu maqan dalka Hindiya.
Madaxdaasi ayaa loo gudbiyay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, waxaana ammaanka goobta uu berri shirka ka dhacaayo uu yahay mid aad loo adkeeyay, waxaana ilaa iyo haatan la ogeyn waxa kasoo bixi doono shirkaasi.
Waxaa sidoo kale shirkaasi goob-joog ka ahaan doono mas’uuliyiin ka socoto beesha caalamka, kuwaas oo si aad uga soo horjeedo in doorasha ka dhici doonto dalka ay dib uga dhacdo waqtigeedda.
Si kastaba ha ahaatee, madaxda madasha wada-tashiga qaran ayaa maalinta berri ah shirkooda uga hadli doono waqtiga rasmiga oo ay dhacayso doorashada dalka Soomaaliya, iyadoo horay uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u sheegay in doorashada Soomaaliya ay waqtigeedii ku dhici doonto, islamarkaana aysan dhici doonin in hay’adaha dowladda ay waqti kororsi sameystaan.